ZTE Modem Problem — MYSTERY ZILLION
ZTE Modem Problem
February 2009 edited March 2009 in Help Desk
MZ မှ အကိုတို့ခင်ဗျား။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ Router ပျက်သွားပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒါ modem နဲ့ဒါရိုက်ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ချင်လို့ပါ။ သူ့Modem က ဟိုးအရင် Port 1 ခုပဲပါတဲ့ ZTE ပါ။ အဲ့ဒါ ပုဂံကို ဖုံးဆက်မေးတာ LAN address ပေးပါတယ် ။ အဲ့ဒါကို Gateway မှာထဲ့ပါတဲ့။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိ Address ကို4တိုးပြီးတော့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ IP နေရာမှာ ထဲ့ပါတဲ့။ အဲ့ဒါ သူပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တာမရဘူးဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ DNS လည်းထဲ့တာပဲ။ Modem ကို Ping လို့တောင်မရဘူးဗျာ။ အတွေ့အကြုံ ရှိသူများ ကူညီပေးကြပါ။ ကျွန်တော်က အဲ့ဒိ Myan Tel က Modem ကိုတစ်ခါမှ မကိုင်ဖူးလို့ပါ။ ကျေးဇူးအထူးကြိုတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
your ZTE modem may be set as factory default. you need re-configure it. try to ping 192.168.0.1 or 192.168.1.1 while your pc set as 192.168.0.2 or 192.168.1.2 . If you recieved reply, this is sure that modem is set to factory default. if so, you must send it to bagan and re-configure it.